युवाहरुको साइकिलिङ मोह - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
यहाका केही युवाहरु हप्ताको बुधवार र शनिवार साइकलमा सवार गर्छन् । इन्जिनवाट स्वचालित हुने साधन नभएर उनीहरुले यसो गरेका होइनन् । सेवा सुविधाले सम्पन्न मूलूक अमेरिकामा चार पांग्रे साधन त अनिवार्य जस्तैं देखिन्छ । सबैं प्रकारका सेवा सहीतले भरिपूर्ण भएका साधनहरु सडकमा गुडिरहेका देखिन्छन् । यस्ता साधनहरु यी युवाहरु सँग समेत नभएका होइनन् । अधिक मूल्यका साधनहरु यिनीहरुसँग छन्, तर कम्तिमा साताको २ दिन आफ्नै खुट्टाले पांग्रा घुमाउँदैं शयर गर्न यिनीहरु रुचाउँछन् ।
२ दिन कम्तिमा ३/४ यिनीहरुले साइकलमा सवार गर्छन्, अहिले अलि चलेको शब्द प्रयोग गर्ने हो भने साइकिलिङ गर्छन् । अहिले यि युवाहरुले नेपलिज टु विलर क्लब नैं बनाएका छन्, आफैंमा संस्थागत भएपनि दर्ता गरेर नैं संस्थागत हुन भने बाँकी छ । अहिले यो क्लबमा ३५ जना जति पुगेका छन्, तर अमेरिका न हो, कामको व्यवस्तता अनि अन्य कारणले नियमित आउनेहरु भने ७/८ जना रहेका छन््, कहिले को आउँदैनन्, कहिले को आउँदैनन् सुरुवातकर्ता मध्येका एक स्वयम्भु शाक्यले सुनाए ।
अमेरिकाका नागरिक स्वास्थ्य प्रति निकैं सचेत देखिन्छन् । साइकिलिङ खेलकुद र स्वास्थ्य दुवैंका लागि हितकर छ , अमेरिकाले साइकिलिङ खेलमा ओलम्पिक देखि धेरैं प्रतियोगितामा पदक जितिनैं रहेको हुन्छ, यसैले अमेरिकन सरकारले यसलाई महत्व दिने गरेको पाइन्छ । स्वास्थ्यको दृष्टिले त झन् यसलाई प्राथमिकतानैं राखेर ठाउ ठाउमा साइकिलिङको व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । शहरका गल्ली देखि सडकहरुमा समेत साइकिल लेन बनाइएका हुन्छन्, यहा डाउनटाउन(शहरको केन्द्र)मा विहान साँझ ठूलो संख्यामा साइकिलिङ गरिरहेकाहरु भेटिन्छन् । गा्रमिण क्षेत्रमा पार्क, लेक छेउ छाउ देखि गल्लीहरुमा पनि साइकिलिङ गर्नेहरुको संख्या कम छैन ।
स्वास्थ्य र खेलकुदको लागि साइकिलिङ भैरहदा नेपाली यी युवाहरुको प्राथमिकता भने स्वास्थ्य नैं हो । व्यस्त दैनिकिले शारिरिक व्यायाम अनि अभ्यासको कमी सँगैं बढ्दो उमेर प्रति सचेतदेखिन्छन् यिनीहरु, खानपानमा पनि कन्ट्रोल गर्नपर्ने जति गर्न नसकिदा भोलिका दिनमा आइपर्न सक्ने समस्याप्रति चिन्तित छन्, उनीहरु र यसको उपायको रुपमा साइकिलिङलाई लिएका छन् यिनीहरु । त्यसो त साइकिलिङमा यिनीहरु अहिले इनजोए गरिरहेका छन्, गु्रपमा जान्छन्, घुम्छन् अनि ह्यागंआउछ गर्छन् यिनीहरु ।
इन्जोय लिने तरिका फरक हुन सक्छ, ह्यांग आउट गर्ने भनेको पियर (मादक पदार्थ) कहा होर ? शाक्यले भने साइकिलिङ गर्दै कोही विचमा कोही अघि कोही पछि वस्छौं, गित वजाउँछौं, आनन्दलिदैं १०/१२ माइल साइकल कुदाउँछौं, साह्रैं रमाइलो हुन्छ ।
साइकिलिङ सुरुवातको् प्रसंग सुनाउदैं शाक्यले २०१७ को फेबु्रअरी/मार्च तिर आफु छोरीको वर्थ डे को समयमा उनका साथीका बुवाहरुसँग गफिदा यो गरौं न भनेर आफूले आग्रह गरेको बताउछन् । साइकिलिङ ट्रेल लेकको छेउमा रहेको छ, जंगल पनि छ, त्यहा हिड्दा सुरुमा एक्लैं हुदा साह्रैं डर पनि लाग्दथ्यो, र एकलैं हिड्दा टायर पन्चर हुने जस्ता समस्याहरु हुदा गाह्रो हुन्थ्यो तर विस्तारैं साथीहरु थपिदैं जानुभयो अहिले त टिम ठूलो भएको छ ।
अहिले नियमित जस्तो आफूसहीत सुरज पौडेल, बाल जोशी, युग जोशी, अमित श्रेष्ठ, सुनिल गौतम, वेदराज वस्नेत, समिर वास्टाकोटी, सुदिप वस्नेतसहीत ७/८ जना सहभागी हुने गरेको यिनले सुनाए । एक वर्ष वढि देखि यो समुहले साइकिलिङ गरिरहदा गएको समर देखि सदस्यहरु पनि बढिरहेका छन् । पछिल्लो समय डा. विपिन वरुण श्रेष्ठ पनि समावेश भएपछि साइकिलिङ का फाइदाको प्राविधिक पक्ष पनि जान्ने मौका मिलेको शाक्यले सुनाए । यो टोलीले नर्थ सोर अकोइ ट्रेलमा नियमित साइकिलिङ गरिरहेका छ । अहिले यो समुहको सक्रियतासँगैं अन्य ठाउका नेपाली युवाहरु पनि साइकिलिङमा आकर्षित भएका छन् । अव विस्तारैं एक ठाउवाट अर्को ठाउमा जाने आउने गर्ने त्यसले फेलोसिप समेत बढाउने शाक्यको भनाई छ ।
अव ड्रेस बनाउन लागिएको बताउदैं समय समयमा डाउनटाउमा समेत साइकिलिङ गरिने जनाउदैं यसले नेपालको प्रवद्र्दनमा समेत टेवापुग्ने आफूहरुको विश्वास रहेको शाक्यले सुनाए । साइकिलिङ गर्दा साह्रैं आनन्द आउँछ, स्ट्रेश कम भएको फिल गर्छु, स्टामिना बढिरहेको छ, उनले भने पर्सनली ह्याप्पी छु । मलाई लाग्छ साथीहरुले पनि इन्जोइ गरिाख्नुभएको छ ।